अन्ततः न हुने भो संशोधन, मधेशवादीले दल अब के गर्लान् ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
काठमाडौं, जेठ ५ : पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि देश दोस्रो चरणको चुनावमा होमिएको छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा मधेशी दलमाथि दबाब बढिरहेको छ । हिजो साँझ बालुवाटारमा सत्तारुढ दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गरेको छलफलले स्पष्ट गरेको छ कि स्थानीय तहको दोस्रोचरणको चुनावअघि संविधान संशोधन हुने छैन ।
तर मधेशमा उनको चुनावी तयारीका कारण राजपाका नेताहरु तर्सिएका छन् , भन्दै रातोपाटीमा रिर्पोट छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा गएपछि राजपालाई आन्दोलन अगाडि बढाउन गाह्रो हुनेछ ।
यद्यपि अहिलेसम्म राजपाको अडान सविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले सविधान संशोधन नभएसम्म आफूहरु चुनावमा नजाने प्रतिकृया दिए । उनले भने, ‘मधेशमा हामी कुन एजेण्डा लिएर चुनावमा जाने ? संविधान संशोधनका लागि यत्रो दिनदेखि आन्दोलन भयो । संविधान संशोधन समेत नगराई चुनावमा गयौं भने अर्थ रहदैन ।’ @Ratopati